Fedora 29 Beta Ichaburitswa Svondo Inotevera | Kubva kuLinux
Pave nemwedzi mishoma kubva zvakaziviswa kuburitswa zviri pamutemo kwazvino vhezheni yakagadzika yeFedora, inova Fedora 28.
Kubva ipapo, vagadziri veFedora vakazvipira chikamu chebasa rako kusimudzira kune ingazove inotevera vhezheni yeFedora 29.
Kunyangwe ivo vakomana vari shure kwekuvandudzwa kweiyi yakanakisa kugoverwa kweLinux vane chirongwa chekuburitsa, mazuva aya haana kunge achingosangana
1 Iyo beta haisati yagadzirira izvozvi
Iyo beta haisati yagadzirira izvozvi
Iyo Fedora 29 Beta yanga yakarongerwa kuve nesununguro yakarongwa kutenderedza Nyamavhuvhu 14 yegore razvino.
Kunyangwe izvi zvave kuda kuita tsika: kuongorora kwehurongwa hakuzovepo svondo rino sezvakarongwa, asi musi waGunyana 25… ndinovimba.
Vagadziri vacho vachiri kushanda pamubuditswa mukwikwidzi Zve beta, asi lIwo makuru bugs haasati agadziriswa izvozvi, kusanganisira imwe kunyanya, kunyangwe isingakanganise makomputa edesktop, kana ikabata muhomwe imwe
Uye ndeyekuti iyo system haina kutanga parizvino paRaspberry Pi.
Vagadziri veFedora vakaita musangano mazuva mashoma apfuura, uko kwavakataura zvishoma nezvenyaya iyi nekuzivisa zvikanganiso zvakamutswa panguva iyoyo, zvakatemwa kuti vhezheni ye beta yakanga isati yagadzirira kutumira.
Kunyangwe paive neshanduro shanu dzemabvunzo dzaizoburitswa se beta, idzi dzaive nezvikanganiso zvakateedzana izvo zvimwe zvikanganiso zveGNOME zviri izvo zvikuru.
Kunyangwe ichigona kufungidzirwa kuti Beta vhezheni yakanyatso kuburitswa kuitira kuti uwane zvikanganiso zvakawanda sezvinobvira shanduko dzisati dzakwenenzverwa uye nekukanganisa kwakagadziriswa kuitira kuvhura yakagadzikana vhezheni.
Chokwadi ndechekuti idzi Beta vhezheni dzinofanirwa kunge dziine "kugadzikana" sekutaura uye kuti vese vashandisi vakajairika vane chinangwa chekutarisa zvishoma pamwe nevasimudziri uye vanhu vanoziva vanogona kupa yavo tsanga dzejecha.
Shanduro dzeBeta ndidzo dzinonyanya kukosha. Iyo bvunzo yekusarudzika ishoma, asi ichiri kubatsira kumhanya.
Chiitiko chinonyanya kukosha chinoratidza kuti pakudhindwa kwechiitiko ichocho kana kuti kubvumidzwa kuburitswa kunotevera, bvunzo yacho inofanira kunge yakamisikidzwa neshanduro yemusununguro (nekudaro, muBeta, zvese zviyero zvealpha uye beta zvinofanirwa kunge zvakaitwa, semuenzaniso).
Nekudaro, izvo zvakakosha kuti umhanye bvunzo kune ese makuru matanho sekutanga uye kazhinji sezvazvinogona.
Pakupedzisira, kana iro boka rekusimudzira harigone kupomedzerwa kana kuyambuka kutyora kwemazuva, nekuti pakupera kwezuva iri Beta vhezheni mairi iri kushanda kuti ikwanise kuigovera yakagadzikana sezvinobvira.
Uye ini ndinotaura kufunga uku ndichienzanisa ne "buntu" uko mazuva mashoma mushure mekutanga iyo "yakagadzikana" vhezheni ivo vatotanga mifanidzo yekuyedza yeiyo ingave yavo inotevera vhezheni.
Ingomirira avo vanofarira kuwana izvo zvichave zvinotevera Fedora Beta uye uone zvavano funga uye zvirongwa zvehunyanzvi izvo vazhinji vedu tinotarisira, izvo zvirinani mune yayo yapfuura vhezheni yakaita mutsauko mukuru.
Iine runyorwa rwembugs izvo zvichiri kufanira kugadziriswa uye kuvhurwa kweiyo nyowani Fedora 29 Beta iri kutoshanda kare.
Maitiro ekugadzirisa akatsanangurwa uye akatanga munaGunyana 14, uye sezvo zvese zviri kufamba mushe, chirongwa ichi chinotenda kuti iyo Fedora 29 yekuedzwa vhezheni ichave yakagadzirira svondo rinouya.
Panguva ino, iyo Beta vhezheni yeFedora 29 inosvika mune yekupedzisira vhezheni pakupera kwaGumiguru. Kana iyo beta ikaramba ichirambwa, zuva racho rinogona zvakare kukundikana.
Kune avo vanofarira kuziviswa nezve zviri kuitika zuva nezuva-zuva nevasimudziri vane iyi nyowani Fedora Beta, vanogona kuzviita kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Fedora 29 Beta ichaburitswa svondo rinouya
Purism inotangisa yekutanga tamper-proof USB chengetedzo kiyi yemalaptop